Ubusika Bulapha! Ingabe Kufanele Ngithenge I-Shower Thermostatic? Lalela Ochwepheshe, Akumangalisi Abantu Abaningi Kangaka Bafuna Ukushintsha !!!
Ikhaya / Blog / Ubusika Bulapha! Ingabe Kufanele Ngithenge I-Shower Thermostatic? Lalela Ochwepheshe, Akumangalisi Abantu Abaningi Kangaka Bafuna Ukushintsha !!!
2021 / 01 / 15 UkwahlukanisaBlog 12385 0
Isikole Sebhizinisi Langasese 2020-11-19
Ukubhekisa emigodini okuhlangatshezwane nayo kubhavu kusuka ebuntwaneni kuya ebudaleni, kuyadabukisa ukusho okuningi.
Eshawa, kutholakale ukuthi awekho amanzi ashisayo!
Nokho, umbuzo wokugcina uthi: Kungani kunzima ukugeza kahle?
Ukusho ukuthi ishawa, empeleni, ilula kakhulu, kufaka phakathi induku, isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu, umlomo wombhobho ohlukaniswe waba isifutho esingaphezulu nesifutho sesandla.
Kepha abanye abantu bathi, ngisebenzise ama-yuan ayishumi ukuthenga ukusetshenziswa okuhle kakhulu. Ishawa igqashuliwe, bese ingena esikhundleni seshawa entsha, futhi awulimazi. Inqobo nje uma ungayigeza ihlanzekile.
Ngakho-ke, akukho lutho olungahambi kahle, kepha isipiliyoni ekugcineni asifani.
Kufana namasenti angama-50 wamabhanisi ashubile, ungadla ngokwanele, izinkulungwane zama-yuan aseMichelin nazo zidla ngokwanele. Kokubili kugcwele, uthanda ukudla ini?
Ukhiye awukho emiphumeleni, kepha ukuthokozela inqubo. Namuhla sizokhuluma ngeshawa ~
Eyodwa. Izinhlobo Zama-Showerheads
Ngokuvamile, kunezinhlobo ezimbili eziyinhloko zamakhanda okugeza emakethe manje: i-thermostatic nejwayelekile. Ekuthengeni okuningi okuvame ukunganqikazi, angazi noma bakhetha i-thermostatic shawa noma ishawa ejwayelekile. Uyini umehluko phakathi kwalokhu okubili?
Ishawa ejwayelekile, umnyombo wayo uyisiqeshana se-ceramic se-thermostatic spool, ngokuswayipha ulungise ukushisa kwamanzi, ujike uye phansi ukulawula ukuhamba kwamanzi. Kuyinto elula kakhulu futhi esheshayo ukuyisebenzisa.
Kepha imvamisa ukusebenzisa ishawa kuzothola inkinga, eshaweni sasebusika, kunzima ukulawula izinga lokushisa lamanzi kuzinga elithile lokushisa. Lokho kungenxa yokuthi ompompi ojwayelekile wokugeza ukuxuba amanzi abandayo namanzi ashisayo ukulungisa ukushisa kwamanzi. Lapho ingcindezi yamanzi eshisayo noma ebandayo ishintshile, izinga lokushisa lamanzi ngokwemvelo lizoqina futhi lishise futhi libande.
Futhi ishawa esithuthukisiwe se-thermostatic, i-spool ingalungiswa ngombhobho nge-thermostat yayo. Ibhalansi ezenzakalelayo yengcindezi yamanzi abandayo futhi ashisayo, ukuze kugcinwe ukuzinza kokushisa kwamanzi.
Ngokombono wokuphepha, izinga lokushisa elijwayelekile lokugeza kunzima ukulilawula. Abantu abadala bageza kulungile, bekwazi ukuphendula ngesikhathi esifanele. Uma kungabantu abadala noma izingane ezigeza, kulula ukushiswa ngemiphumela emibi.
Ishawa yokushisa ingasethwa ezingeni lokushisa le-othomathikhi, ngaleyo ndlela inciphise amathuba okushiswa. Udonga lwangaphakathi lwompompi lwenza nokwelashwa okulwa ne-scald. Noma ngabe uthinte ngephutha ompompi, ngeke ushiswe, uthuthukise ukuphepha kweshawa.
Ngaphezu kwalokho, ishawa nayo ingahlukaniswa ibe yishawa ephathwa ngesandla, i-top spray shawa kanye ne-side spray shower ngokusebenzisa.
Izishawa eziphathwa ngesandla zivame kakhulu futhi ziyahlukahluka kakhulu. Umndeni jikelele uthe ishawa, imvamisa kubhekiswa eshaweni eliphathwa ngesandla. Lesi shawa kulula ukusisebenzisa, singageza zonke izingxenye zomzimba, ngesihlalo esimisiwe, singaphinde sifeze ukusebenza kweshawa esisheshayo, eshibhile impela.
Manje izindlu eziningi ziya ngokwanda zifakelwa ishawa yokufafaza ephezulu. Usayizi walesi shawa mkhulu, ngokuvamile ungaphezu kwamayintshi ayi-8, ubude nobubanzi obuthile bungaba ngaphezu kwemitha elilodwa. Ishawa esisha kakhulu singafinyelela imvula, inkungu yamanzi nokunye okukhipha amanzi, ukuze umsebenzisi afane nokuba semvelweni, azwe ukuthinta okuqonde kakhulu kwamanzi.
Side Spray Shower
I-Side spray shower idinga ukulungiswa odongeni, ifafaza amanzi ohlangothini, izakhiwo zayo ezisizayo zikhulu, ikakhulukazi ukufeza umsebenzi wokubhucungwa. Esinye isifutho sesifutho sohlangothi singalungisa i-engeli ukufeza phezulu naphansi, ukuphuma kwamanzi, kwesobunxele nangakwesokudla noma okungajwayelekile, ungageza bese uhlikihla umzimba wonke. I-Side spray shower ngokuvamile ayithengiswa ngokwehlukana, imvamisa ithengiswa njengengxenye yohlelo lokugeza olufihliwe noma isethi yokugeza.
Okwesibili, Indlela Amanzi Aphuma Ngayo KuShower
Njengoba igama lisho, amanzi emvelo amanzi afafazwe ngendlela yemvelo kakhulu, ngaphandle kokwelapha. Okufafazwe kusuka emigodini ye-silicone yeshawa, amanzi ngokwawo ngengcindezi ethile, angageza umzimba wonke, iyindlela ejwayelekile kakhulu yamanzi.
Amanzi Womoya Womoya
Kukhona ikhefu lomoya emgwaqweni wamanzi ngaphakathi kweshawa. Ukugeleza kwamanzi ngesivinini esiphezulu kuhambisa ukugeleza komoya futhi kuxube ukwakha ikholomu yamanzi. Iguqula amanzi okufafaza okuqala abe ngamanzi aconsayo. Amanzi we-bubble agcwele futhi athambile. Ngemuva kokuthi amanzi egijimele emzimbeni, amabhamuza amancane asele emzimbeni ayaqhubeka nokuqhuma, alethe ukuphola okuhle.
Amanzi wokubhucungwa agxila emanzini agxila emgodini wamanzi wokubhucunga. Umgodi wokubhucungwa une-rotor engaguqulwa. I-Rotor iqhutshwa umthelela wokugeleza kwamanzi futhi ijikeleze ngejubane eliphezulu ngaphakathi kweshawa, ikhiqize izigaxa zamanzi ngokusika ingxenye yokugeleza kwamanzi ngobuningi. Ukuchaphazeleka okunjalo kwamanzi kushaya emzimbeni ukuze udlale indima yokubhucungwa umzimba, okubizwa ngokuthi yi-massage water.
Futha amanzi kungenxa yokuthi imbobo yokufafaza esephaneli yakhelwe ngokukhethekile. Kugeleza amanzi ngenkungu. Amanzi enkungu anendawo enkulu, futhi ukuba senkungwini yamanzi kunikeza umbonisi umuzwa ohlukile.
Imvamisa ibonwa emakhanda ashawa ngaphezulu, umgomo ukushintsha imbobo yokuphuma kwamanzi ibe umugqa. Amanzi akhishwa emgodini omncane wokuqala angene ekuphumeni komugqa. Abantu bema ngaphansi ngokungathi impophoma yemvelo ingamanzi phansi.
Ezinye izihlambi azikwazi ukushintsha kuphela phakathi kwamanzi ahlukahlukene, kepha futhi nangezindlela ezimbili noma ngaphezulu ngasikhathi sinye. Isibonelo, amanzi emvelo ngamanzi e-bubble yindlela ejwayelekile yokuxuba amanzi.
Okwesithathu, The Quality Of The Shower
Lapho ukhetha ishawa akudingeki wenze ukuhlolwa kwamanzi, kuphela ngokuthinta iso nesandla. Izindawo eziyinhloko zokuhlola izingxenyana zezinhlamvu ze-silicone, kanye nesingxobo.
Lapho uthenga ishawa esetshenziswa ngesandla, naka kakhulu imbobo yokuphuma kwamanzi. Izinga lokuphuma kwalo linquma ukuthi ngabe ikholomu lamanzi elifuthwe eshaweni liyalinganiseka, ngesimo noma ngaphandle kwesimo. Indawo yokuphuma eshaweni ngokuvamile yenziwe nge-silicone. Umgodi wokukhipha amanzi wekhwalithi uhlanzekile, ubushelelezi futhi uthambile. Lokhu okusanhlamvu kwe-silicone akuqinisekisi kuphela ikhwalithi yokuphuma kwamanzi, futhi kuhlanzeke ngaphandle kokunakekelwa.
Umthungo weshawa uveza kakhulu "ubuciko" bendawo. Umthungo omuhle kufanele uqine futhi igebe kufanele libe lincane, ukuze uvikele ngempumelelo ukuvuza kwamanzi nokuqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo.
Ubuso obugqinsiwe buyisilinganiso sokuqina kweshawa noma cha. Indawo enhle yokuthaka ibushelelezi, ngaphandle kwamamaki amahle, futhi ngeke ibe nokuzwakala okuxakile lapho kuthintwa. Lapho uthenga, ungabeka ishawa ngaphansi kwesibani bese uyihlola ngokucophelela. Uma uthola ukuklwebheka noma ukungalingani, impilo yokusebenza yalesi shawa nayo izoncipha kakhulu.
Okwesine, Amakhono Okukhethwa Kwe-Shower
Bheka Umphumela Wokufafaza
Ukusuka ngaphandle, ukuma kweshawa kubukeka kufana. Ukukhetha kufanele kubheke umphumela wokufafaza, ishawa enhle ingaqinisekisa ukuthi umgodi ngamunye wokufafaza omncane ulinganisela futhi uhambisane. Ekucindezelweni kwamanzi okuhlukile, ingaqinisekisa umphumela weshawa obushelelezi. Lapho ukhetha, ungahlola amanzi ukuze ubone ukuthi indiza yamanzi ilingana yini.
Bheka Indlela Yokufafaza
Idizayini yangaphakathi yamakhanda eshawa nayo iyahlukahluka. Ekukhetheni kweshawa esetshenziswa ngesandla, ngaphezu komphumela wayo wokufafaza, indlela yokufafaza ishawa ngesandla nayo ine-surge, massage, ngokulandelana. Indlela ejwayelekile yokufafaza ingaletha injabulo yokugeza esikahle. Ishawa esetshenziswa ngesandla singakhethwa ngokuya ngemodi yesifutho efanelekile: uhlobo lweshawa yemvelo futhi emnandi, uhlobo lokuthanjiswa okunempilo, uhlobo lokunethezeka nolufudumele, uhlobo lwekholamu lamanzi abushelelezi noluthambile, isimo sokonga amanzi sohlobo lwedriphu.
Bheka I-Ceramic Valve Core
Umgogodla we-valve uthinta ukusetshenziswa komuzwa wokugeza kanye nempilo yesevisi. Ishawa enhle isebenzisa i-ceramic spool, ebushelelezi futhi engaholi. Ekukhetheni kwezandla kungasonta iswishi, uzizwe ukhululekile, ubushelelezi ukuqinisekisa ukuthi umkhiqizo osetshenziswayo ukugcina ukusebenza okubushelelezi nokwethembekile.
Bheka I-Surface Plating
Ukushisela ngeshawa kuhle noma kubi, ngaphezu kokuthinta ikhwalithi nempilo yesevisi, kepha futhi kuthinta nenhlanzeko ejwayelekile yokuhlanzeka. Ukugeza kuvamise ukufakwa kwe-chrome ngaphezulu. Ukufakwa okuhle kungagcinwa ekushiseni okuphezulu okungu-150C ° ngehora elingu-1, akukho ukushaywa ngamabhanela, akukho ukushwabana, akukho mkhuba wokuqhekeka nokuxebuka. Ukuhlolwa kwe-acetic acid salt spray test akukonakalisi. Ekukhetheni kungabonakala ekucwebezeleni nasekubusheleleni kwayo, ishawa ekhanyayo nebushelelezi ikhombisa ukugoqwa okufanayo, ikhwalithi engcono.
Ubusika sebufikile, shesha ukuthola isethi yeshawa ye-thermostatic, ekhaya nayo ingenza i-SPA nsuku zonke!
Edlule :: Dizayina Igumbi Lokugeza Ekhaya Ukuze Lihle Futhi Ube Nesimo Esihle Esikhathini Sokugeza Zonke Izinsuku Olandelayo: Noma Igumbi Lokugezela Lingaphansi Kwamamitha ayisikwele ayi-5, Isigaxa Esimanzi Futhi Esomile Akunzima Ukungihlula!
Kungani Izindlu Zokugeza Zabanye Abantu Zibukeka Zizinhle Kangaka?
2021 / 04 / 12 841
Indlu yangasese eyodwa yanele, Kungani Udinga Amakamelo Amabili Okugeza EChina?
2021 / 04 / 12 760
Indlu yangasese endlini, khetha ukungena endlini yangasese yodonga? Noma i-Floor Drainage Toi ...
2021 / 04 / 12 717
Igagasi Elibandayo Liphinde Lishaye! Imikhiqizo Yokugeza, Ungawuvimbela Kanjani Umkhuhlane?
2021 / 04 / 11 1037
Faka ishalofu ethoyilethi, Igumbi lokugezela Phila Ngokushesha Amamitha ayisikwele ama-5!
2021 / 04 / 11 839
Ungayifaka Kanjani Indawo Yokugeza Ngendlela Eyengeziwe? Qala Kulezi Zici Ezine ...
2021 / 04 / 10 637